Caporetto 1917 "L'è el dì di Mort, alegher! (Delio Tessa). Testo originale: Traduzione Caporetto 1917 "L'è el dì di Mort, alegher !
Caanuhu waxa ay leeyihiin faa'idooyin badan oo caafimaad, sababtuna waa maaddooyinka waxtarka badan ee ay hodanka ku yihiin, kuwaas oo ay ka mid yihiin Potassium, Kalshiyaam, Faytamiin B-12, Barootiin, Kaarboon Haydaraat iyo Dufanno faa'ido u leh jidhka, sidoo kale caanuhu waa il aad u muhiim ah oo laga helo Faytamiin A ga. Dhakhaatiirta caafimaadku waxa ...
Cilmibaadhiso arrintan la xidhiidha ayaa daahfuraya in awoodda urta eydu ay inta u dhexeysa 100 kun illaa hal Milyan oo jeer ka awood badan tahay awoodda urta aadamaha. Daraasaddu waxa ay sheegtay in eydu ay adeegsato 200 illaa 250 Milyan oo unug oo urta oo keliya shaqadoodu tahay, halka unugyada uu aadamuhu urta u adeegsadaa aanay ka badnayn 5 ...
Waxaa kale oo isbedel kuyimaadaa urta, wax waliba oo dadka usoo carfa ayaa laga yaabaa in ey usoo uraan hooyada waliba ey kudawaqdo urtaas. isbeddal dabeecadeed waa mid caadi ah dadka qaarna aad ayay udarantahay xaaladdaan oo waxaa laga yaabaa in ey dagaal kuqaadaan qof aan waxba kasameyn.
Urtada kaadida oo xumaata. Waxaa jira dhowr sababood oo keena in urta kaadidu ay xumato, waxaa ka mid ah caabuqa iyo boogaha, ama kaadi mareenka oo qayb haani xidhantahay. Waxa kale oo urta kaadida beddela dhagaxa kelyaha ama kaadi haysta ku samaysma.
Taas oo aan u la jeedo maka ogaan karaa urka ay kaadidiisu leedahay ama dhinaca ka le udhigo kaadisiiso oo usoo urta sidii sonkorta oo kale ma la oran karaa waa qof ...
Apr 04, 2019 · – Waxa ay badiyaan kaadida, oo ay fududeeyaan qul-qulkeeda, waxa aanay la dagaallamaan qururuxa kelyaha iyo kaadi haysta ku samaysma. – Caanuhu waxa ay si weyn u caawiyaan yaraynta cudurka Kansarka noociisa ku dhaca midhicirada, cilmibaadhiso cusubina waxa ay dhowaan daahfureen in caanaha ciirta ahi ay leeyihiin maaddooyin liddi ku ah ...
Taas oo aan u la jeedo maka ogaan karaa urka ay kaadidiisu leedahay ama dhinaca ka le udhigo kaadisiiso oo usoo urta sidii sonkorta oo kale ma la oran karaa waa qof sonkor qaba.....\_\_ Teeda kale xiliga qaboobaha ah qofka badsada biyaha cabidooda iyo sharaabka, taasina ay keento inta badan inuu musqasha badsado gaar ahaaan habeenkii inuu dhawr ...
† Isbeddel ku dhaca qadarka, midabka ama urta dheecaanka hoosta haweenka † Cuncun ama gubasho ah agagaarka hoosta haweenka † Kaadida oo ku gubta † Kaadi qabashada oo soo badata † Nabaro ama finan ka soo baxa agagaarka daloolka hoosta † Galmada oo xanuun leh † Qarqaryo ama qandho † Xanuun caloosha ah ama maroojis
Kaadida oo urta Iyo xanuun laga dareemo miskaha iyo gumaarka. Dadka ugu badan oo uu saameeyo infekshanka ku dhaca kaadi mareenka ayaa ah haweenka, taasoo loo sababeeyo gaabnaanshaha tuubada kasoo qaado kaadi haysta ee loo yaqaano urethra marka loo eego ragga. Jun 20, 2020 · Cilmibaadhiso arrintan la xidhiidha ayaa daahfuraya in awoodda urta eydu ay inta u dhexeysa 100 kun illaa hal Milyan oo jeer ka awood badan tahay awoodda urta aadamaha. Daraasaddu waxa ay sheegtay in eydu ay adeegsato 200 illaa 250 Milyan oo unug oo urta oo keliya shaqadoodu tahay, halka unugyada uu aadamuhu urta u adeegsadaa aanay ka badnayn 5 ... Hooyada ilmaheeda ku ciqaabta in haddii uu wax ay doonayso sameeyo ay ka dhaafayso gef uu galay oo ciqaabtiisa uu ka baqayo, ay ilmaheeda ku sababi karto burbur nafsi ah iyo cillad dhinaca neerfayaasha ah oo xitaa gaadhi kara in uu kaadida xejisan kari waayo ilmuhu, oo uu gaar ahaan habeenkii uu isku kaajo.